Blue umbala amashumi eminyaka bekulokhu phezu yesikhulumi amaqoqo amaningi imfashini. Nani nithanda blue wasebukhosini kukhanya noma ngogesi? Lesi sihloko uzokutshela nalokho umbala uya okwesibhakabhaka nokuthi ukukhetha ngubo esifanele umthunzi zakho ozithandayo.
Kuyinto imfihlo ukuthi umbala linezincazelo eziningi. Imibala eluhlaza ahlukanisa zikagesi, blue, oluluhlaza kanye lasolwandle blue. Lokho kuhlangene shades blue nezinye ngakho? Believe me, lezi imibala ezingenakubalwa.
Electric blue lingachazwa ngokuthi blue-blue noma oluhlaza ephethe tinge lemicu empunga elinamathela othini. Izinto imibala enjalo Kunconywa ukugqoka, ophuzi, onsundu futhi segolide izingubo ezinemibala. Ngokuvumelanayo ngogesi nge shades grey. Kepha oluluhlaza aqua, ke okufanelekela kangcono a onsomi, ukhilimu, onsundu, amathoni oluphuzi omnyama. Fuchsia kubangela abhanqiwe nge blue duo namanzi. Inhlanganisela evumayo kakhulu izingubo amathoni eluhlaza okwesibhakabhaka - orange, omhlophe, oluhlaza, gray, ukuphaphatheka umbala Lilac.
Dark blue noma njengoba ibizwa, inki okwesibhakabhaka, ofanele ngezinto ayegcwele ensundu, emhlophe, uphayini green, blue, grey, pink elikhanyayo, ophuzi kanye oluluhlaza. Qaphela inhlanganisela luhlaza nge matte amnyama ithoni oluhlaza kanye anemibala zibuthuntu-bomvu.
Blue - inkosi wonke imibala
Manje uqhubeke ngqo nombala oluhlaza. Yini umbala uya blue? Phakathi shades kokungathathi hlangothi afanelekela eluhlaza okwesibhakabhaka, ungabahlukanisa: ezimhlophe, ezimpunga, ukhilimu, umbala yezinyo lendlovu beige. Kodwa kungaba futhi kunenzuzo ukubheka lo ezinemibala egqamile zokugqoka.
Orange itholakala ohlangothini okuphambene isondo umbala, evumela ukuba kuhlanganiswe ngobunye okwesibhakabhaka. izintokazi eziningi ngokuvamile singabaze: noma ebomvu kuhlangene blue? On umbala obomvu endulungwini elise eduze blue - abayikho-analog, ukuze bakwazi zixutshwe e ngubo efanayo. Siphinde ukutusa ukuba banake izinto phuzi njengoba blue and yellow, futhi, abasondelene e bohlu umbala.
Yini umbala uya blue okwamanje? shades Purple futhi oluhlaza zihlobene red yellow, okusho ukuthi ngeke ngokuphelele naleli okwesibhakabhaka.
Lokhu umbala unamandla amakhulu futhi kufanelekile cishe zonke uhlobo isikhumba. Uma unquma uyifaka ngubo, ke nje ngeke ulahlekelwe. Into esemqoka okufanele uyikhumbule Ukubusa owodwa ezibalulekile: bazi lapho sekuyisikhathi sokuba ayeke! Asikho isidingo uhlanganise nabanye amathoni eluhlaza okwesibhakabhaka. Zonke ukuhluka abasakwazi jikelele: bakwazi ukugqoka ukusebenza, a disco noma yimuphi omunye umcimbi.
Ukwakha isithombe stylish we nsuku zonke, esikhundleni jeans bendabuko, ibhulukwe, khetha umbala oluhlaza okwesibhakabhaka. Uma ufuna ukubheka ocacile zikanokusho osemcimbini, makudle bagqoke amathoni ocebile okwesibhakabhaka.
Ekamelweni lakho egcwele izinto blue? Kuhle kakhulu! Manje ngoba sewuyazi ukuthi nalokho umbala uya okwesibhakabhaka. Isilingo, thatha kanye nomdlalo imibala, izesekeli sigcwalisa isithombe, kepha makudle kuphela inhlanganisela enjalo ukuthi ozithanda.
Umzimba njengendlela yokuziveza: okushiwo yi-cleft treble (tattoo)
Yakha ngezandla zabo. A amacebo ambalwa ezokwenza ukusiza ekwakhiweni kanye nokulungiswa
"Dior" (Iphunga zabesilisa): ukubuyekezwa. Iphunga Abantu